Haweeney Xaamilo ah oo ka qeyb galeeysa tartanka Olombikada ADuunka ee London kasocda(Daawo Sawirada) - iftineducation.com
aadan21 / August 2, 2012
iftineducation.com – Haweeney u dhalatay wadanka Maleysia oo lagu magacaabo Nuur Suryaani Maxamed Taibi ayaa waxa ay haatan ka qeyb galeeysaa tartanka Ciyaaraha kala duwan ee ka socda magaalada London ee xarunta Engkand.
Nuur Suryaani Maxamed Taibi ayaa waxaa la sheegayaa in ay caloosha ku sidaa UUR, waxaana Dhaqaatiirta OLOMBIKADA adduunka ee London sheegeen in Haweeneydan ay u saamixi karto ka qeyb galka tartanka Ciyaaraha.
Dhaqaatiirka oo baaris ku sameeyay xaaladda Caafimaad ee marwada ayaa waxa ay wariyeen in ay ka qeyb gali karto tartanka Olombikada, inkastoo dadka qaar ay arintaan la yaabeen.
Nuur Suryaani Maxamed Taibi oo 27 jir Maleysiyaan ah ayaa leh caloosha ku sida uur, mana ahan Haweeneydii ugu horeeysay ee iyadoo uur leh ka qeyb galeeysa tartanka Ciyaaraha Olombikada adduunka oo afartii sano mar la qabto.
Mar ay saxaafadda la hadleeysay Miss Nuur Suryaani ayaa waxa ay sheegtay in ay ku qanacsan tahay in ay ka qeyb gasho tartanka Tuurista fog, iyadoo ku rajo weyn guul ay kasoo hooydo tuurista fog ee 100 M ah.
” Aniga uguma horeeyo Qof uur leh oo Olombikada aduunka ka qeyb gasha, waxaana jeclahay inaan guul kasoo hooyo tartanka Tuurista fog, waan jeclahay ciyaalkeyga lakin baaritaan la igu sameeyay ayaa ii saamaxay inaan Olombikada Uk ka qeyb galo” ayey tiri Nuur Suryaani.
Haweeneydaan ayaa ugu dambeyntiina sheegtay in labo maalin kadib ay tartami doonto, iyadoo niyad wanaagsan ka muujisay ku guuleysashada Biladda Dahabka xilli ay uur leedahay.
Burcada South Afrikaan ah oo Bilowday Dhac Nuuc Cusub ah iyo Soomaalida oo lasoo daristay Cabsi Xoogan